Nihetsika ny fanjakana : Mpanao kidnapping 19 sarona -
AccueilRaharaham-pirenenaNihetsika ny fanjakana : Mpanao kidnapping 19 sarona
28/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mpaka an-keriny miisa sivy ambin’ny folo no efa tra-tehaky ny zandary sy ny polisy nanomboka tamin’ny fiandohan’ity taona 2017 ity, taorian’ny ezaka sy ny hetsika nataon’ny fitondram-panjakana. Vehivavy ny telo tamin’izy ireo, ary hahitana mpitandro ny filaminana telo ihany koa, izay niray petsapetsa tamin’ireo jiolahy tamin’ny fanatanterahana ity asa ratsy ity. Anisan’izy ireo i Lemainty na Le-jean sy ny vadiny, izay voasambotra tany Mahajanga tamin’ny 23 jona lasa teo. Mpanao kidnapping gaigilahy avokoa izy ireo ary saika voarohirohy tamin’ny raharaha fakana an-keriny nisesisesy teto an-toerana. Efa ela no nifanaovan’izy ireo fangalam-piery tamin’ny manampahefana, saingy rehefa nanaovana ezaka manokana mihitsy, dia tra-tehaka tsikelikely ihany. Efa eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy sy eny Antanimora moa ny ankabeazan’izy ireo amin’izao fotoana izao, miandry ny fotoam-pitsarana azy tsirairay avy. Mbola hanaovana fanadihadiana lalina kosa, alohan’ny hanolorana azy eo anatrehan’ny fampanoavana, ireo izay tratra vao haingana. Noho ny fisesisesin’ny raharaha fangalana an-keriny karàna teto amintsika moa, dia tsy nitazam-potsiny ary nandray izany ho toy ny raharaham-pirenena mihitsy ny fitondram-panjakana, ka nanetsika ireo mpitandro ny filaminana mba hahafahana misambotra sy mandrava ireo tambazotra ao ambadik’izy ireny.
I Ra-Maître izao ohatra,dia jiolahy gaigilahy efa ikoizana mihitsy amin’ny resaka kidnapping sy ny fanafihana mitam-piadiana. Tra-tehaka ihany anefa ity farany rehefa ela nifampitadiavana sy ela nitoratorahana. Toraka izay ihany koa i Ratah sy ny ekipany. Nielanelana fotoana fohy fotsiny no nahasamborana azy ireo, izay mpinamana sy samy lohandohan’ny mpisorona ihany amin’ity asa ratsy ity. Saika nahatrarana basy mahery vaika avokoa ireto jiolahy ireto tamin’ny fotoana nahatrarana azy. Ankoatra ny fikarohana manokana natao, dia niainga tamin’ny fanomezam-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo ihany koa ny mpitandro ny filaminana tamin’ny fisamborana azy ireo. Nanomboka tamin’ny fiandohan’ity taona ity izao, dia efa nahatratra dimy ny isan’ny trangana fakana an-keriny teto an-drenivohitra, kia ilay niseho teny Maibahoaka Ivato no farany. Ny anisan’ny nanaitra ny saina, dia nitovitovy avokoa ny fomba fiadin’ireo jiolahy tamin’ny fanatanterahana ity asa ratsy ity. Manomboka tany amin’ny isan’ny fitaovam-piadiana ka hatrany amin’ny fotoana namotsoran’izy ireo, ireo karàna nalaina an-keriny. Mbola anisan’ny nahatalanjona ihany koa ny momba ireo raharaha kidnapping niseho faramparany teo satria vao votsotra iray andro fotsiny i Yanish Ysmael, dia efa lasibatra sahady ny karàna tompon’ny “Hotel Le Grand Mellis”. Ankoatra ny asan-jiolahy, dia inoana fa misy tetika hafa ihany koa ao ambadik’ireny tsy fandriampahalemana hita etsy sy eroa ireny. Rehefa akaiky ohatr’izao mantsy ny fotoam-pifidianana, dia misy olona manao ny fomba rehetra mihitsy mba entina handemena ny fitondram-panjakana mijoro.